Vaovao - Torolàlana hividianana seza miforitra farany: Karazana, fitaovana ary tombony azo ampiasaina
Torolàlana hividianana seza miforitra farany: Karazana, fitaovana ary tombony azo ampiasaina
Eo an-tsena ho an'ny seza miforitra mahomby nefa tsy azonao antoka hoe aiza no hanombohana?Ny mpitari-dalana anayseza miforitramanome izay rehetra tokony ho fantatra alohan'ny hividiananao.
Avy amin'ny tombontsoa ho an'ny orinasanao ka hatramin'ny safidy misy, ity ny torolalana malalaka momba ny seza miforitra.
Inona no atao hoe seza miforitra?
Ny seza miforitra dia miavaka amin'ny ankamaroan'ny karazana seza hitanao manodidina ny birao.Ny endriny, ny fahatsapana ary ny nanorenana azy ireo dia tena hafa amin'ny seza birao mahazatra.
Ny seza miforitra dia natao ho an'ny fampiasana voafetra, hipetrahana mandritra ny fotoana fohy.Ny lafin-javatra toy ny ergonomika na ny fampiononana maharitra ho an'ny mpampiasa, dia tsy raisina amin'ny famolavolana azy - fa manamafy ny fampiharana sy manolotra safidy maivana.
Matetika novidina betsaka, ny seza miforitra dia matetika ampiasaina amin'ny toerana malalaka hanaovana hetsika toy ny fampakaram-bady na toerana hivorian'ny mpiasa marobe miaraka.Araka ny hevitr'ilay anarana, ny seza miforitra dia azo aforitra haingana amin'ny habeny mora kokoa ary apetraka ao anaty fitahirizana.
Tombontsoa azo avy amin'ny seza miforitra
Inona no entin'ny seza miforitra amin'ny fikambanana misy anao?Ireto misy telo amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra.
Ny iray amin'ireo singa mahasarika indrindra amin'ny seza miforitra dia ny fahafahana manoritra azy ireo rehefa tsy ampiasaina.Ny orinasa sy ny sekoly dia mampiasa azy ireo amin'ny hetsika na fivoriambe, alohan'ny hamoritra azy ireo ho vonona hotehirizina.
Ny seza miforitra dia manome anao fahafahana hanana seza malalaka ho an'ireo karazana fotoana ireo nefa tsy maka toerana lehibe ao amin'ny toerana fitahirizanao.
Ny seza miforitra dia natao ho an'ny fotoana fohy.Noho izany dia azo esorina ny famolavolana mba tsy hamela afa-tsy ny filana fototra.Raha tsy misy endri-javatra sy fitaovana lafo vidy, ny vidin'ny seza miforitra dia mety ho ambany kokoa noho ny an'ny safidy maro.
Tsy hahita seza azo ampiharina kokoa noho ny seza miforitra ianao.Tsy vitan'ny hoe aforitra ao amin'ny toerana fitehirizanao azy ireo ianao na esorinao vonjimaika ao amin'ny efitrano iray mba hampiasaina amin'ny zavatra hafa, fa azo entina koa izy ireo.Raha mila seza ampiasaina amin'ny hetsika lavitra ny birao na ny sekoly ianao, seza miforitra no safidy tonga lafatra.
Amin'ny fampiasana sarety seza miforitra, azonao atao ny mitondra seza am-polony miforitra mora foana ao anaty vondrona iray.Na dia tsy misy sarety aza dia maivana ny seza miforitra ary mora mihetsika amin'ny isa maro.
Karazana seza miforitra
Misy karazana seza miforitra vitsivitsy eny an-tsena - ireto ny karazana seza miforitra sy ny tokony hodinihinao amin'ny tsirairay.
seza miforitra metaly
Misy fitaovana telo manan-danja ampiasaina amin'ny rafitry ny seza miforitra;ny voalohany dia metaly.Ny fitaovana mateza indrindra sy matetika lafo indrindra, seza vy vy matanjaka dia mety haharitra ela kokoa noho ny karazana hafa rehetra.
Akora mafy orina dia natao haharitra
Tsara ho an'ny fampiasana anatiny na ivelany
Azo ampiasaina imbetsaka tsy misy fahasimbana
Iharan'ny harafesina raha tratran'ny orana
Seza plastika miforitra
Ny plastika dia fitaovana mora kokoa noho ny metaly, noho izany dia ho lafo kokoa ireo karazana seza miforitra ireo.Na izany aza, miaraka amin'ny fanorenana mora kokoa dia tsy dia mateza loatra.Tahaka ny metaly, ny plastika dia mora madio foana satria azo kosehina aorian'ny fampiasana.
Maivana ka mora entina
Mora voafafa mba hadio
Azo ampiasaina anatiny na ivelany
Seza hazo miforitra
Ny hazo dia manolotra zavatra izay tsy ananan'ny metaly sy ny plastika - ny fomba.Ny hazo vita amin'ny kalitao tsara dia karazana seza miforitra kanto kokoa, ka mahatonga azy ireo ho safidy tsara ho an'ny hetsika toy ny fampakaram-bady na lanonana ara-dalàna hafa.
Premium fijery sy fahatsapana
Ny kalitaon'ny fananganana matanjaka
Karazana seza miforitra padding
Betsaka ny seza miforitra miaraka amin'ny padding naorina, manampy singa mampionona amin'izay mety ho sarotra sy tsy mahazo aina.Amin'ny ankapobeny dia tonga amin'ny iray amin'ireo endrika roa izy ireo.
Seza miforitra lamba
Ny voalohany dia lamba.Ity karazana saron-tava ity dia mandeha tsara amin'ny fampiononana saingy mety tsy mety amin'ny ivelany noho ny fahapotehan'ny orana.
Padding tena mahazo aina
Mahatohitra ny mari-pana ambony kokoa
Tsy mahatohitra ny rotsak'orana
Sarotra ny manadio rehefa mandeha ny fotoana
Natao ho an'ny trano anatiny
Seza Aforitra Vinyl
Ny safidy hafa atolotra dia vinyl.Ity karazana padding ity dia mitondra tombony sy ratsy raha oharina amin'ny lamba.Ny padding vinyl dia azo entina any ivelany, fa amin'ny andro mafana indrindra dia tsy mahazo aina ny mipetraka.Mora kokoa ny manadio ny vinyl amin'ny famafana azy fotsiny.
Padding mahazo aina
Mety tsy mahazo aina rehefa tratran'ny hafanana
Mora foana ny madio
Azo ampiasaina ivelany na anatiny ihany
Fikarakarana seza miforitra
Ampiasao amin'ny seza miforitra matanjaka sy avo lenta, ary mety ho tsara mandritra ny taona maro hampiasaina betsaka izy ireo.Mba hahazoana ny tsara indrindra amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra, dia mila manao fikojakojana fototra isan-taona ianao.
Isan-taona, jereo ny seza miforitra ary jereo raha afaka mamantatra ny iray amin'ireto olana manaraka ireto ianao:
Fizarana amin'ny plastika
Miharatsy ny welding
Visy tsy hita
Mba hiarovana ny mpiasa, ny mpianatra na ny mpampiasa hafa, ataovy azo antoka fa manamboatra ny iray amin'ireto fahasimbana manaraka ireto na mitondra solony.Raha jerena ny maha lafo vidy ny seza miforitra, dia tsy tokony ho fandaniana lehibe izany raha toa ka mila manolo seza roa miforitra isan-taona.
Sarety seza miforitra
Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny seza miforitra dia ny fahafahana mamindra azy ireo amin'ny 'masse'.Mba hanaovana izany dia mila sarety seza miforitra ianao.Na eto aza dia misy ny fanapahan-kevitra raisina amin'izay hovidina.
Sarety mihantona seza miforitra
Mihantona mitsangana sy mihantona eny amin'ny rivotra, dia mety tsara ireo raha manangona seza maro isan-karazany tianao halamina.Miaraka amin'ny andalana maromaro hanantonana seza, azonao atao ny manokan-dalana ho an'ny karazana seza na loko iray.
Sarety mitaingina seza miforitra
Ireo seza ireo dia mamela ny seza mba hapetraka mitsivalana mitodika midina ao anaty antontam-bato.Ny tombony lehibe indrindra amin'ireo dia ny fanamorana ny stacking satria azo apetraka eo amboniny fotsiny izy ireo.Na izany aza, rehefa mitombo ny stack dia mety ho sarotra kokoa ny fidirana amin'ireo seza ambony.
Sarety mitsangana seza miforitra
Ireo sarety ireo dia mametraka ny sezanao amin'ny toerana mahitsy, mamela ny fametrahana tsotra mifanila.Mifanohitra amin'ny sarety seza stacking, ny seza izay atambatra amin'io fomba io dia mitovy ny haavony.Izany dia mahatonga ny fidirana mora amin'ny seza rehefa te haka azy ireo amin'ny sarety ianao.
Ny seza miforitra dia tena ilaina, fipetrahana isan'andro izay ahafahan'ny orinasa rehetra mahazo tombony.Amin'ny fampiasana an'ity torolàlana ity dia ho afaka hamantatra hoe iza amin'ireo seza miforitra no mety amin'ny orinasanao, ny sekoly na ny fikambananao.